I-BMW 420i Convertible ithule ngaphakathi
Fanelesibonge Bengu | September 6, 2021
IMOTO: BMW 4 SERIES CONVERTIBLE
UKUFIKA kwenyanga entsha, uSepthemba, kusho isiqalo esisha kwabanye abantu ngoba kusho ukushintsha kwesimo sezulu sithi ukufudumala.
Isikhathi sehlobo sithandwa ngabaningi ngoba ilanga alisheshi ukushona futhi abantu bathanda ukuzishayelwa umoya nemindeni yabo.
Yilapho sibona khona nezimoto ezivuleka ukhakhayi zivuliwe, abantu bethi ukuzipholisa kwazise kuba nzima ukuzivula uma kubanda. I-BMW 4 Series Convertible, etheleke kuleli ekuqaleni konyaka, uyakwazi ukuyivula ngisho kungashisi kangako ngoba iyafudumala ngaphakathi ngisho ukhakhayi luhleli phansi.
Uyivula unyuse amawindi bese ufaka isisefo sokuvimba umoya ezihlalweni zangemuva ukuze umoya ongena ngaphakathi ungabi mningi kangako. Uma ugodola ngenxa yomoya opholile wantambama, uyakwazi ukukhipha umoya oshisayo emqaleni ezihlalweni zangaphambili uphinde ushisise nezihlalo.
Ukuvula ukhakhayi kuthatha imizuzwana elinganiselwa ku-18 futhi uyakwazi ukuyivula noma ukuyivala ngisho ihamba kodwa ngesivinini esiphansi.
Omunye uzakwethu kudala wake wathi ehamba ngesilahla waphoqeleka ukushiya i-coolerbox yakhe ngoba yayingangeni ebhuthini uma ivulwe ukhakhayi. Kulena isikhala sikhona yize singeke silingane nese-4 Series eyejwayelekile kodwa sikhona. Ngemuva abagibeli bahlala kahle kwazise yinde.
Engikuthandayo ukuthi ngisho ukhuluma neselula uma uyixhume nge-Apple CarPlay/Android Auto kwi-infotainment system ngaphandle kwentambo, umuntu okhuluma naye akezwa ukuthi uhamba ngemoto evulwe ukhakhayi. Ebengingakuthanda ukuthi kube nesipikha esiseduze nasekhanda ukuze uzomuzwa kahle.
Uma uluvalile ukhakhayi lwayo oluyindwangu, uze ukhohlwe ukuthi ibuye ivuleke ngendlela ethule ngayo ngaphakathi. Umsindo wangaphandle mncane kakhulu.
Izinto enazo ngaphakathi kubalwa ukuthi ishaja ngaphandle kwentambo, izihlalo zesikhumba, inkombandlela, ama-sensor asiza uma upaka, i-cruise control nokunye.
Emgwaqeni ihamba ngenjini engu-2.0 litre four-cylinder turbo kaphethroli. Inamandla angu-135kW ne-torque engu-300Nm. U-gearbox uyi-8 speed automatic. Amandla ayo ayenza ikwazi ukusuka ku-0 iye ku-100km/h ngemizuzwana engu-8.2 kanti ijubane elikhulu ngu-236km/h.
Ihamba kamnandi, intofontofo futhi iyabambelela nasemgwaqeni. Yize ukwazi ukuzishintshela amagiya ngemuva kwesiteringi kodwa asikho isidingo ngoba u-gearbox uma uzenzela, wenza kahle. Kuphethroli ibidla amalitha angu-7.8 ngo-100km.
Ifika nama-airbag, amabhuleki e-ABS ne-stability control.
Yimoto enhle, ewadonsayo amehlo, oyijabulelayo ngezimpelasonto uma ushaywa wumoya futhi nansuku zonke engenankinga ngoba isikhala sikhona futhi ithule ngaphakathi uma ivaliwe.
BMW 420i Convertible M-Sport R975 900
Intengo ihlanganisa intela yeVAT kodwa ayiyifaki eyeCO2. Ifika ne-maintenance plan yeminyaka emihlanu noma u-100 000km.